ISouth China Sea: izici, imvelaphi kanye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngohlobo lolwandle olunezici ezithile ezihlukile futhi oluthathwa njengamanzi amaningi. Imayelana ne- ISouth China Sea. Luhlobo lolwandle oluseceleni olusePacific Ocean futhi igama livela ekubeni seningizimu yeChina. Indawo okulo lolu lwandle icishe ibe yizigidi ezingama-3.6 skwele amakhilomitha. Itholakala eningizimu yezwekazi laseChina.
Kulesi sihloko sizokutshela ngazo zonke izici, ukwakheka nokubaluleka koLwandle lwaseNingizimu China.
2 Amazinga okushisa oLwandle lwaseNingizimu China
3 Ukwakheka nemvelaphi
4 Izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo zoLwandle lwaseNingizimu China
Luhlobo lolwandle olunqamula ePhilippines, eTaiwan, eMalaysia, eSingapore, e-Indonesia, eThailand, eBrunei, eCambodia naseVietnam. Ngasenyakatho-mpumalanga kuneTaiwan Strait, empumalanga iPeninsula yaseMalay futhi eningizimu yiBorneo. Kubhekwa njengomthamo omkhulu wamanzi futhi kunebheseni eliphakathi nendawo eline-elliptical futhi liqukethe iziqhingi ezingaphezu kuka-250 ezincane, amabhange, amadwala, ama-atoll nezikhiye. Kunamaqembu amaningana eziqhingi ezinkulu lapho eziningi zazo nezokuvakasha zenziwa khona. Inani elikhulu lemifula lingena emanzini olwandle, njengeMekong, iPearl River, iMin, iJiulong, iRajang, iPajang, iRed, iRio Grande de la Pampanga nePásig.
ISouth China Sea ayijulile kangako. Ngokungafani nolunye ulwandle oluthi, nakuba lincane, lujulile, lolu lwandle lunokujula okulingene cishe kwamamitha ayi-1.212. Ithafa elixwayisa lowo ongaphansi kwamanzi nokuthi inamamitha ayi-4.300 ukujula. Ukushintshaniswa kwabo kwamanzi nolwandle kwenzeka kakhulu endaweni eyaziwa ngokuthi yi-Straits of Luzon. Le ndawo inesibopho sokuxhuma lolu lwandle nalolo lwasePhilippines ukuze lube yingxenye yePacific esempumalanga.
Amazinga okushisa oLwandle lwaseNingizimu China
Uma sihlaziya ingaphezulu nezindawo eziseduze kwabo siyabona ukuthi amanzi ngokuvamile afudumele. Ithempelesha ngokwesilinganiso azungeze ama-degree angama-29 phakathi nezinyanga zasehlobo. Kuyiqiniso ukuthi ngezikhathi zasebusika amazinga okushisa ayahlukahluka, kepha lokhu akwenzeka ngamazinga ambalwa. Isabhekwa njengenye yezilwandle ezifudumele kakhulu. Izinga lokushisa ezinyangeni zasebusika lehlela kuma-degree angama-21, kepha lihlala licishe lingaguquguquki ngamanani ama-27 degrees kwezinye izindawo. Ingxenye esenyakatho ibanda kakhulu.
AmaMonsoon anethonya elikhulu kulolu lwandle. Futhi kungenxa yokuthi lezi zimila yilezo ezilawula imisinga engaphezulu yolwandle nemimoya evunguza kule ngxenye. Kuvamile kakhulu ukuthi izivunguvungu eziningana zenzeke ngesikhathi sehlobo. Kuthathwa njengenye ye- izilwandle ezisezingeni eliphakeme kunawo wonke emhlabeni futhi inkulu kunazo zonke entshonalanga yePacific Ocean.
Njengengxenye yoLwandlekazi iPacific, iSouth China Sea yakhiwa ivela kulolwandle olukhulu futhi yakhiqizwa eminyakeni engaphezu kwezigidi ezingama-750 edlule. Emuva ngaleso sikhathi, kwakukhona izwekazi elihle elalaziwa ngegama likaRodinia. Kumele kukhunjulwe ukuthi lolu lwandle cishe luneminyaka eyizigidi ezingama-45 ubudala, yize lwalwakhiwe phambilini. Kuqhamuke njengomphumela wemicimbi eyahlukahlukene yamathoni ngemuva kokuthi indawo ihambele kude nezwekazi laseChina.
Kukhona ososayensi abathile ababheka ukuthi ukunyakaza kwe- amapuleti ama-tectonic ukuthi yikuphi ukukhululeka okwenziwe yilolu lwandle okwaqala eminyakeni eyizigidi ezingama-55 edlule. Le nhlangano yaqina lapho kushayisana amapuleti ama-tectonic aseNdiya kanye noqwembe lwama-tectonic ase-Eurasia.
Umcengezi owadala lolu lwandle noma lusemncane wawuphakathi nesikhathi seMiocene. Le bheseni lalinwetshwa laze lafinyelela ekwandisweni kwephansi lolwandle ukuze kwakheke uqweqwe olusha ngemuva kokuqhekeka koqweqwe lwamazwekazi iRodinia enkulu. Kuthathe cishe iminyaka eyizigidi ezingama-30 ukwakha. Ulwandle lwacwila kancane ngesikhathi se- i-ice Age lokho kwenzeka ngesikhathi sika I-Pleistocene.
Izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo zoLwandle lwaseNingizimu China
Lolu lwandle lunothe kakhulu empilweni yasolwandle. Kunezinhlobo eziningi zezinhlanzi eziyingxenye ebalulekile yokudla kwawo wonke lamadolobha aseduze nolwandle. Phakathi kwezilwane zasolwandle zoLwandle lwaseNingizimu China sithola i-tuna, ama-sardine, i-herring, i-mackerel ne-croaker. Noma kunjalo, abantu babangela umsebenzi wokudoba ngokweqile kulezi zindawo futhi kukhona ezinye izinhlobo ezisendleleni yokuqedwa ngokuphelele. Kunezinhlobo ezithile ezisengozini yokuqothulwa ezingezona izinhlobo zezinhlanzi ezidliwayo kuphela. Sithole kanye nolofudu lwasolwandle oluhlaza kanye nolofudu iHawksbill. Lezi zimfudu ezimbili zaziziningi kakhulu esikhathini esedlule, yize namuhla isibalo sazo siphansi. Basengabonakala kwezinye izindawo kepha ziqonde ngqo.
Izinhlobo eziningi zoshaka zenza ikhaya lazo kulamanzi. Ezinye zazo yizilwane ezizingelayo zangempela ezifana noshaka omhlophe, ushaka we-basking noshaka wasendle. Emaphethelweni ogwini, ikakhulukazi lawo aseningizimu yalolu lwandle, angabonakala ezixhotsheni eziningi zamakhorali. Kwezinye izindawo kunotshani basolwandle kanye neziqhingi eziningi ezinganikeza indawo ekahle yokuphila kwezinhlobo ezithile zezinyoni ezifana ne-brown gannet, i-great-billed tern ne-white tern.
Enye yezinzuzo lolu lwandle olunikezayo nesinye sezizathu eziyisisekelo zokunotha kokuhlukahluka kwezinto eziphilayo ukuthi uLwandle lwaseNingizimu China lokho icebe kakhulu ngemithombo yemvelo. Inezinqolobane zegesi yemvelo ezingaba ngumthombo omkhulu we-hydrocarbon esifundeni sonke. Lokhu kwenza lolu lwandle lubaluleke kakhulu kwezomnotho. Ambalwa kuphela amaqembu asesiqhingini esiwabalulile ngenhla angamafutha nomoya wemvelo ogcwele ngempela. Ngokuvamile, kucatshangwa ukuthi olwandle lunezinqolobane ezinkulu. Amanzi ayindlela ebalulekile yasolwandle eye yazulazulwa amakhulu amaningi eminyaka.
Lolu lwandle lusongelwa yizinto eziningi. Phakathi kwabo sithola ukudoba ngokweqile nezinye izingosi zokubanjwa ezingadalwanga ezibanga ukonakala kwezinhlobonhlobo zezinhlanzi. Kanjalo izindawo eziningi zofudu zokwakha izidleke zithinteka ekulahlekelweni yindawo yokuhlala kanye nokudoba ngokweqile. Ukungcola kungenye yezinkinga ezinkulu ezithinta ukuhlukahluka kwemvelo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeSouth China Sea.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » South china ulwandle